Ukhenketho lweMalta lwenza ukuba kube lula ukuHamba kubakhenkethi abasuka eMelika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeMalta Breaking » Ukhenketho lweMalta lwenza ukuba kube lula ukuHamba kubakhenkethi abasuka eMelika
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeMalta Breaking • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukhenketho lweMalta lwenza ukuba ukuHamba kubelula kubakhenkethi abavela e-USA-kubonwe apha yiValletta
NgoLwesihlanu, nge-23 kaJulayi, 2021, iGunya lezoKhenketho laseMalta lityikitye isivumelwano neVerifly ejolise ekunikezeleni isisombululo esingenasiphelo kubakhenkethi abavela e-USA, abahamba eMalta. Uyilo lobucala be-VeriFLY luqinisekisa ukuba idatha yomsebenzisi ikhuselekile kwaye isetyenziselwa kuphela injongo kunye nexesha elifunekayo ukwanelisa iimfuno zohambo.
Abahambi abavela e-US ukuya eMalta baya kuba nethuba lokuqinisekisa impilo yabo kunye nokubonelela ngamanye amaxwebhu.
Inkqubo yeVeriFLY inceda ukukhawulezisa isitofu sokugonya se-COVID-19, ukuqinisekiswa kwamaxwebhu, kwaye ibonise iziphumo ngendlela ecacileyo, efundeka lula.
I-VeriFLY inabasebenzisi abangaphezu kwesigidi esi-1.5 esisebenzayo kwihlabathi liphela.
Ngapha koko, abasebenzisi beVeriFLY baya kugcina ulawulo olungqongqo malunga nokuba, nini, kwaye ngubani owabelana naye ngolwazi lwabo. Ngoku ngaphezulu kwesigidi se-1.5 sabasebenzisi abasebenzayo kwihlabathi liphela, i-VeriFLY sisikhwama sedigital sokuqala esamkelwe ngokubanzi senzelwe ukunceda abahambi kunye nababekho kumsitho ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo ukukhawulelana neemfuno zabo ze-COVID-19.
Abahambi abavela e-US ukuya eMalta baya kuba nethuba lokuqinisekisa impilo yabo kunye nokubonelela ngamanye amaxwebhu, njengoko kufunwa ngabasemagunyeni bezeMpilo baseMalta, ngokusebenzisa iVeriFLY app enceda ukuhambisa isitofu sokugonya se-COVID-19, ukuqinisekiswa kwamaxwebhu, kunye neziphumo ezibonisa ngokucacileyo , ngendlela efundeka lula.
Emva kokwenza iprofayili ekhuselekileyo kwizixhobo zabo eziphathwayo, abakhweli baya kulayisha ulwazi lokugonya kunye namanye amaxwebhu njengoko kufuneka ngqo kwiVeriFLY. Uhlelo lokusebenza lweVeriFLY luya kuqinisekisa ukuba ulwazi lomgibeli luhambelana neemfuno ezibekwe nguMalta kwaye zibonisa ukupasa okulula okanye ukusilela umyalezo. Ukulandela oko, umgibeli uya kukhokelwa ukuba agcwalise iphetshana lokufumana indawo yokungena eMalta.
Inkqubo yeVeriFLY, efumaneka kuGoogle Play nakwiVenkile yeApple yeApple, iya kwenza ukuba abasebenzisi basebenzise ukupasa kwabo "Uhambo oluya eMalta", olubandakanya iimfuno yokungena eMalta, Ilungelelaniswe yoluhlu lokujonga olusebenziseka lula, emva kokugqiba zonke iinkcukacha ezifunekayo.
“Esi sivumelwano sibonisa amandla eMalta okukwazi ukuziqhelanisa ngokukhawuleza nemingeni emitsha ephathelene nokuhamba. Uhlelo lokusebenza lweVeriFLY luya kusebenza njengesixhobo esibalulekileyo sokukhusela uxolo lwengqondo kubantu baseMelika nakwimpilo yoluntu yaseMalta ngokubanzi. Sizakuqhubekeka nokusebenza nzima ukuqinisekisa ukuba icandelo lezokhenketho lendawo lilandela indlela yalo yokubuyela kwimeko yesiqhelo ngendlela ezinzileyo nenenkathalo, ”kuphawule uMphathiswa wezoKhenketho noKhuselo lwaBathengi uClayton Bartolo.
“I-MTA iyazingca ngokufikelela kwesi sivumelwano ne-VeriFLY, nto leyo eza kwenza kube lula ngoku kubakhenkethi abavela e-USA ukuba batyelele iMalta, ngokubonelela ngendawo yokumisa enye kubakhenkethi ukuba bangenise onke amaxwebhu afunekayo phambi kokuba bemke. Oku kuyakuthetha ukuba abakhenkethi bazakuhamba benoxolo lwengqondo kwizikhululo zeenqwelo-moya zabo, besazi ukuba onke amaphepha abo alungile, oko ke kuqale iholide yabo yokuphumla ukusukela nje xa bengena kwinqwelomoya, ”utshilo u-CEO we-MTA uJohann Buttigieg, esongeza ukuba Esi sivumelwano, abasemagunyeni baseMalta baxhasa ngokusesikweni ukusetyenziswa kweVeriFLY ukuze kungene ilizwe ngokufanelekileyo.